Warkii.com-News and information about Somalia SAWIRRO: Wasiirka Dastuurka oo ka warbixiyay Waxyaabihii uu kala kulmay Magaaladda Cadaado? - Warkii.com-News and information about Somalia
SAWIRRO: Wasiirka Dastuurka oo ka warbixiyay Waxyaabihii uu kala kulmay Magaaladda Cadaado?
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa ka warbixiyay safarkii wafdi uu hogaaminayay ay ku tageen magaalada Cadaado ee caasimadda KMG ah ee dawlad goboleedka Galmudug.
Dhanka kale, Wasiirka ayaa ka hadlay kulan kale oo ay Wasaaradda u qabatay Ururada Bulshada Rayidka ee Galmudug.
Wasiir Xoosh ayaa sheegay in uu sii waqdi doono wadatashiga ku aadan dib u eegista dasuurka qabyada ah ee Jamhuuriaydda.